Mametraka fomba fiasa ahazoana mifanakalo vaovao haingana momba ny firongatry ny andiam-balala ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fambolena. Ireo rehetra te hampita vaovao mahakasika ny lalan-kizoran’ny andiam-balala dia afaka miantso amin’ny laharana maitso 145.
Manohy ny fanitarany ny masoivohony eto an-drenivohitra sy manerana ny Nosy ny banky Boa. Vokany : efa misokatra ho an’ireo mpanjifa ny masoivohon’ity banky ity etsy Ampandrana. Sady ahitana milina fakana vola eo anivony. Marihina fa isan’ireo banky maro mpanjifa ny Boa.
Tapatapany, Mpanoratra Rijakely, 14.07.2012, 08:21	FIARAHAMONINA